Hazvibviri kuti vatize digitaalinen nyika nhasi. Kubva Laptops kuti smartphones, paavhareji American ane akawanda digitaalinen mukukurukurirana daily. Uye nokuda millennials, chizvarwa akabva zera munguva Internet yaitonga, kukurukurirana digitally ndizvo zvavari kuziva. Zvinoita zvakasikwa kwavari pakufema. Saka, zvichida zviri hazvishamisi kuti kukoreji uye kuyunivhesiti pazvikoro vari kuramba vachitsvaka kuti nokupinza digitaalinen anoratidza kupinda ruzivo yekoreji. University vatungamiriri vanoziva zvavanoda kutaura mutauro kukoreji-zera vadzidzi kukwezva navo, uye vadzidzi chanhasi achinyatsogona digitaalinen.
1. Kupararira ruzivo
Pane zvakawanda Vhuṱanzi kuti anofanira kubuda ari kukoreji pazvikoro. Digital signage anogona kupa musha vakawanda izvozvo. Izvi zvinosanganisira:
mitambo nhandare uye nhandare;
kuvaka kuvhara mazuva uye nguva;
Concerts nezvimwe pazviitiko
digitaalinen Muterere mapuranga yokudyira chivako; uye
Misangano uye anokosha vakurukuri
2. Wedzerai kudzidza
Nhasi mumakoreji vazhinji vakapakata projectors. Digital signage kunopa mikana yakawanda kushandisa Multimedia kunatsiridza hurukuro. Mapurofesa anogona kuratidza masiraidhi yaitaura pfungwa dzinokosha kana kuridza mavhidhiyo chokuita kugutsikana.
Vaya kutyira kuti vadzidzi kuti kuteerera hurukuro kana vane chidzitiro pamberi pavo havana chokutya. Ongororo dzinoratidza kuti kugara kuratidza PowerPoint masiraidhi panguva hurukuro hakuna inokanganisa vadzidzi 'rwokupedzisira kugiredhi zvaitika. A nokukurumidza ruvhevhe: No anopfuura matatu bara pfungwa uye mashoko 20 paminiti yemasiraidhi ndiyo nzira yakanakisisa kuti chokwadi mashoko rinoverengwa zvabatwa.
Vanopfuura 40 muzana zvikoro havana mirayiridzo zvokuita panjodzi Posted in Labs dzavo uye dzokugara. Kunyange zvakawanda zvikoro vanotadza kuposita mirayiridzo nezvimwe zvivako. Zvisinei, mumwe mudzidzi kana fakaroti kana mudonzvo nhengo aigona kuva pose apo dambudziko nenjodzi. Sei Vachaita kuwana ruzivo? Ko vanoziva zvokuita?
Centralized digitaalinen signage achibvumira mumakoreji uye mumayunivhesiti kuti shoko kubuda pose pose ari kembasi. Sefa anogona upenye mu vakashinga mavara kuti aratidze kuti nechimbichimbi akasvinurira uye anopa mirayiridzo apo vadzidzi vanofanira kuenda uye zvavanofanira kuita kuti vave vakachengeteka. Chero bedzi pane simba uye internet access, zviratidzo zvinogona yoku- pakarepo uye ari kure.